65 000 ireo mpitsidika handrasana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nanao famelabelaran-kevitra nanoloana ireo mpanao gazety ny tompon’andraikitra ao amin’ny MCU na maison de communication des universités mahalaza azy ihany koa ny trano serasera an'ny oniversiten'i Madagasikara ny talata 10 novambra 2020 mahakasika ny hetsika karakarain’izy ireo ny 23 ka hatramin’ny 25 novambra, tao amin’ny toeram-piasany ao Analakely.
Hiditra amin’ny andiany faharoa amin’ny hetsika ny mpikarakara amin’ity taona ity ny salon de l'étudiant et de l'emploi. Ny MCU na maison de communication des universités no mikarakara ity salon de l'étudiant et de l'emploi izay tontosaina ny 23 ka hatramin’ny 25 novambra hoavy izao ao amin’ny zaridainan’Anosy, ahitana tranoheva 50 misy ireo tolotra isan-karazany manodidina ny fiofanana aorian’ny bac . Ny tanjona dia entina hanampiana ireo tanora mpianatra hieritreritra sahady ny fianarana na fiofanana aorian’ny fahazoana ny baccalaureat, ny mpianatra manomboka amin'ny kilasy faharoa ka hatrany amin'ny famaranana na Terminale no tena asaina hanatrika ny hetsika.
Mandritra io telo andro io dia hisy ihany koa ireo valandresaka karakarain’ireo mpikarakara manodidina ny famoronana asa ka hiompana amin’ny famoronana asa aorian’ny fandalovan’ny covid19 izao.
Araka ny efa mahazatra moa dia iarahana amin’ny groupe Telma izay mpanohana ofisialy ny hetsika, ary koa amin’ireo mpiara miombon’antoka ny societé ATDO sy Angenco Madagascar. Araka ny fampatsiahivana nataon-dRtoa Fanjanarivo Symonette Pascaline, tale jeneralin’ny MCU, dia nambarany « fa ny MCU dia établissement public eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy fikarohana siantifika, izay natao hamaly ireo filan’ny mpianatra, mpampianatra, mpikaroka, ny mpandraharaha ara-toe-karena, ireo mpanapa-kevitra amin’ny information culturelle, scientifique, na miankina amin’ny fanjakana na tsy miankina.
Ilain’ny mpianatra ny hetsika tahaka izao hanampy azy amin’ny fianarana ataony aorian’ny bac, indrindra moa fa ahitany izay mety aminy mba ialana amin’ny fanaovana asa izay hita nefa sady tsy manavanana no tsy tiana. 65000 ireo mpitsidika handrasana.
Covid 19 sy UCM : Mompera Marc Ravelonantoandro rekteran’ny Université Catholique de Madagascar manazava ny fiatrehana ny valanaretina - il y a 25 jours
EPP ao Talata Ampano : Nanokafana ny fizarana arona akanjo ho an’ny mpianatra sy mpampianatra - il y a 2 mois